Tag: shirkii | Sagal Radio Services
Madaxweyne Xasan Sheekh oo soo xirey shirka wadatashiga mustaqbalka Soomaaliya (Sawiro)
Sagal Radio Services • News Report • December 9, 2015
Shirka madasha heerka sare ee wadamada iyo hay’adaha iskaashiga la leh Soomaaliya ayaa gelinkii dambe ee shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho.
Akhriso qodobo muhiim ah oo kasoo baxay Shirka dib u habeynta Garsoorka dalka ee uu dhabarka ka riixayay Faarax(Sawiro)
Iyadoo maalmahaani uu Shirweyne looga hadlaayay nidaamka gorsoorka , xeerka samaynta maxkamada Dasrtuuriga, ayaa waxaa maanta la soo afjaray shirkaasi oo Asbuuc socday.
DAAWO SAWIRRO: Shirkii dhexmaray Barack Obama & Madaxda dalalka Afrika
Maalin ka hor waxaa magaalada Washington ee dalka Mareykanka lagu soo gaba-gabeeyay shirkii ugu horreeyay oo ay yeeshaan madaxda Afrika iyo madaxweye Mareykan ah, kaasoo inta badan looga hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka Mareykanka iyo Afrika u dhexeeya.
Shirkii looga hadlayay ammaanka iyo dhaqaalaha Qaaradda Afrika oo labadii casho ee lasoo dhaafay ka socday magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska ayaa lasoo gaba-gabeeyay caawa, iyadoo la isku raacay in Afrika laga caawiyo sidii ay uga bixi lahayd dhaqaale xumada iyo amni-darrada haysata.
Daawo sawiradda:Shirkii dib u Heshiisiinta Gobollada Jubbooyinka oo manta ka furmay Magaalada Muqdisho ee Xarunta Somalia
Shirkii dib u heshiisiinta gobollada Jubbooyinka ayaa maanta oo Axad ah ka furmay magaalada Muqdisho ee xarunta Somalia, iyadoo inta badan ergooyinkii ka qaybgeli lahaa uu ku sugan yihiin Muqdisho.
Dib u dhac ku yimid kar kale shirkii xukuumada ay sheegtay in uu dhacaayo 21 bishan oo manta ku beegneed.
Sagal Radio Services • News Report • October 21, 2013
Shirkii lagu waday in uu magaalada Muqdisho ka furmo manta oo isniin ah ayaa mar kale dib u dhac uu ku yimid kadib markii ay Dowlada Soomaaliya iyo maamulka uu hogaamiyo Shiikh Axmed Madoobe ay siyaaba kala duwan ugu hadleen .
Shirkii Midowga Afrika oo lasoo gabagabeeyay iyo Maxkamada ICC oo loogu baaqay inaysan u yeerin Mas'uul xil haya
Shirkii madaxda ururka Midowga Afrika ayaa lasoo gaba-gabeeyey iyadoo go'aanadii kasoo baxay ay ka mid yihiin in madaxweyne ama ku xigeen Afirkaan ah aan looga yeeri karin maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC, lana xushmeeyo mudada ay xilka hayaan.